Ikomityi yePhepha, ibhokisi yeNoodle, isaladi Bowl - Haishu
Packa Ukupakishwa kokutya okusingqongileyo- Biodegradable-Compostable】 Le yindlela yekamva.
Iimpawu zentsulungeko: Ukunyaniseka, uxanduva, ukusebenzisana, ukuBumba izinto ezintsha
Umbono: Yiba lishishini elikhulu nelinikwa imbeko kwaye ube yinkokeli yentengiso kupakisho.
Umsebenzi: Ukuba negalelo kubomi obungcono
Isixhobo esizenzekelayo esihlaziyiweyo
Iimveliso zephepha ezinobuhlobo
Ixabiso elifanelekileyo, iquanlity ezinzileyo
Phendula kwiiyure ezingama-24
Ikomityi eNye eWall Wall
Yasekwa ngonyaka ka-2009, uJudin Pack Group ngumenzi obalulekileyo weekomityi zokutya ezilahliweyo kunye nezitya, ezikwi-Ningbo City, isixeko esidumileyo samazibuko, sikonwabela ukuthuthwa okufanelekileyo, okusizisele amathuba ngakumbi kunye neenzuzo zokhuphiswano kwiimarike zamanye amazwe. Inkampani inamava kwinkonzo zorhwebo lwangaphandle kunye namava olawulo, njengoko ukusebenza kwale nkampani kuzisa amandla amakhulu.
Ngokutsho kwedatha yeNtengiso yeDatha, intengiso yephepha elinokubakho ngamaphepha kunye nopakisho lweplastiki lixhomekeke ngqo kuhlumo loluntu nakubathengi. Utyekelo lokuqhelana neluncedo malunga neempahla ezinokubakho luhambisa ukukhula kweshishini kwihlabathi liphela ...
I-MinSK, nge-25 kaMeyi (i-BelTA) -I-National Academy yezeNzululwazi zaseBelarus iceba ukwenza umsebenzi we-R & D ukumisela ezona zithembiso zithembisayo, ezendalo kunye nezoqoqosho zezobuchwephesha zokwenza izixhobo ezinokubakho kunye nezinto zokupakisha ezenziwe ngazo, i-BelTA ifunde kwiBelarusian Natural Resourc .. .
Ukupakishwa okusekwe ephepheni kuxhaswe ngabathengi ngegalelo labo kwezendalo
Iziphumo zovavanyo olutsha lwaseYurophu zibonisa ukuba ukufakelwa okusekwe ephepheni kuyathandwa ngenxa yokuba zingcono kwindalo, njengoko abathengi besiba nolwazi malunga nokukhetha kwabo ukupakisha. Uvavanyo lwabathengi base-Yurophu abangama-5, 900, abaqhutywa ngumkhankaso wecandelo lamaShishini amabini amaZantsi kunye nophando ozimeleyo ...